မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: ချစ်တယ် မီးရယ်...
10/07/2009 5:48 AM
အမ်း ဟုတ်တယ် ဗေဒါ
ဒါပေမယ့် တို့ ထင်တာ လူတွေကရလေလိုလေ အိုတစ္ဆေ ဆိုသလိုပဲနော် ...မရောင့်ရဲတတ်ကြဘူး
ဒါပေမဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေကတော့ ရသလောက်မီးလေးနဲ့ ရောင့်ရဲနေကြတာ ဘယ်လောက်ကြာပတုံး Vista ရယ်... ရသင့်ရထိုက်တဲ့ အခွင့်အရေးကိုတောင် မေ့တဲ့အထိပဲ...
ဟုတ်ပ ဟုတ်ပ မဗေဒါရယ်
ကမ္ဘာပေါ်မှာ သည်းခံတတ်တဲ့ လူမျိုးစာရင်းကောက်ရင် မြန်မာတွေ ပထမရမှာသေချာတယ်။
ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ စပါယ်ရာဟောက်လဲ ပြန်မပြောဘဲ မကြားသလို ငြိမ်ခံတတ်တာ. မီးမလာလဲ ညကြီးသန်းခေါင် ရေထတင်ရတာ။ ဘာအကြောင်းဘဲဖြစ်ဖြစ် ကွန်ပလိန်းမတတ်တတ်တာ။ တကယ်ကိုညည်းခံနိုင်ကြတယ်.။(စလုံးကရွှေမြန်မာများမပါပါဘူး) ဒါတောင်တချို့ မြန်မာတွေ သည်းခံတတ်တုန်းပါဘဲ. စလုံးမှာတော့ ကိစ္စသေးသေးလေးကအစ ကွန်ပလိန်းဆိုတာ တက်လိုက်ရမှ ကျေနပ်တတ်ကြတယ်နော်။
သရဲလေးကောင် ကား မရှိခင် 91-92 ခုနှစ်လောက်မှာ ဖယောင်းတိုင်နဲ့ စာထကျက်ရတာ မှတ်မိတယ်..။
10 တန်းတွေ စာမေးပွဲဖြေတဲ့ တစ်ပတ်လုံး မီးလာပေးတာလည်း မှတ်မိတယ်။
ဟိုဟာဒီဟာနဲ့ ပြောကြသေးတာပဲကို ဟိဟိ
10/07/2009 6:13 PM
ဒါကလဲ ကွန်ပလိန်းလုပ်လို့ရတဲ့နေရာ ရောက်နေတော့လဲ လုပ်ကြတာပေါ့... တော်ပါပြီ.. ဆိုလိုတာကို ပြောတော့ပြောချင်ပါတယ်... ဒီမှာတော့ မပြောတော့ပါဘူး... လူချင်းတွေ့မှပဲ ပြောတော့မယ်... မှတ်ထားလိုက်နော်... ဟဲ... ဟဲ...
ညီမ အစ်မတွေ အဖြစ်ကျတော့လည်း ထူးမခြားနားပါပဲ
အစ်မက ရောက်ခါစက မီးပူတွေ တိုက်တိုက်ထားတတ်တယ်တဲ့
အစ်မ မလိုဘူးလေ ဒီမှာ မီးမှမပျက်တာ
သွားခါနီးမှ တိုက်လို့ရပါတယ် လို့ လာပြောသတဲ့
မြန်မာမှာ နေတုန်းကတော့ မီးလာတုန်းလေး ပြေးလုပ်ရတဲ့ အဖြစ်တွေက အများသားလား
ဘယ်အရာ မြဲမြဲ မမြဲမြဲ မီးမလာတာတော့ မြဲနေသေးတယ်နော် :P